Dumarka Bajamas jumlada ah ee adeega guryaha xariir barafka leh surwaal gacmo dhaadheer leh dabeecad gacmeed xumbo gacmeed laba-gabal soo saare iyo alaab-qeybiyeyaal ah | Xaragada
Dumarka Bajamas waxay u adeegaan guryaha xariirta xariirta ah surwaal gacmo dhaadheer leh dabeecad gacmeed xumbo gacmeed laba jajab ah
Waxyaabaha ay ka kooban tahay: satin / polyester
Lambarka Moodalka: 463008qilu
Dhererka Gacanta (cm): Gaaban
style: haweenka pijamas
style1: jaangooyo jumlo jumlo ah
style2: dharka jiifka ee jilicsan ee dumarka ah
sheyga: dharka jiifka
Faa'iidooyinka dharka hurdada xariirta ah
1. Ku dheji maqaarka:
Bajamyada Xarka ah waxay ka kooban yihiin fiilooyin protein ah, jilicsan oo siman, jilicsanna taabashada. Marka la barbardhigo dharka kale ee fiber, isku dheelitirka khilaafaadka maqaarka dadka waa 0.074 oo keliya. Sidaa darteed, marka maqaarka aadamuhu taabto alaabada xariirta, waxay u eg tahay inuu yeesho dareen jilicsan oo jilicsan. Waxay leedahay saameyn difaac oo wanaagsan maqaarka.
2. Dhiirrigelinta jirka
Bajamyada Xarka leh waxay leeyihiin nuugista qoyaan dabiici ah waxayna sii daayaan astaamo, taas oo aysan u dhigmin fiilooyinka kale ee macmalka ah.
Qaabka xulashada iyo habka aqoonsiga ee dharka xarkaha xariirta
A. Habka kormeerka muuqaalka:
1. Fiireedka xariirku waa khafiif yahay oo dheer yahay, fiber suufku wuu gaaban yahay, dhogorta ayaa laaban. Fibirka kiimikada wuxuu leeyahay nadiif wanaagsan.
2. Baadhitaan muuqaal ah, xariirta dhabta ahi waxay leedahay dhalaal jilicsan, fudayd iyo jilicsanaan, iyo dareen dharbaaxo ah. Dhalashada dharka fiber kiimikada ma ahan mid jilicsan, dhalaalaya oo dhalaalaya.
3. Qaabka dareemaha gacmaha: Xariirku wuxuu dareemaa jilicsan, siman oo raaxo leh oo u dhow maqaarka. Waxaa jiri doona laalaabid marka la dhigayo, marka waxaa jirta odhaah ah "laalaab ama xariir la'aan".
B. Habka gubashada:
1. Xariirtu waxay leedahay urta baalasha guban marka la gubayo, way adag tahay in la sii wado gubashada, waana la bakhtiiyaa. Dambasku waa mid jilicsan, jilicsan, jilicsan, iyo madow.
2. Suufka iyo balastarku waxay leeyihiin macaan aad u daciif ah markii la gubo. Iyagu sii wadi maayaan inay si toos ah ama tartiib ah u gubtaan, oo dambaska waa wareegsan yihiin oo u egyihiin kuul.
3. Cudbi iyo linen labaduba waxay leeyihiin urka warqadda gubaysa, dambaskauna waa jilicsan yihiin oo waa cawl madow.
4. Dhogor ayaa la mid ah xariirta markii la gubo. Farqiga u dhexeeya labadooda waxaa lagu arki karaa kormeer muuqaal ah.
Shixnad & Gaarsiin
Waxay qaadan doontaa qiyaastii 7 maalmood in loo dhiibo macaamiisha haddii lagu diro xawaare dhakhso leh.
Hore: Youhottest 2020 Silsilad Dharka Buluugga ah ee Dharka Buluuga ah ee Satin Dharka La'aanta
Xiga: Toddoba-rubuc gacmo-gacmeed xagaaga shabeel daabac gacmo-dheer oo gacmo-dheer oo jilicsan oo isku-joog ah
Dharka dhaadheer ee Xijaabka
Qaab cusub oo xariir baraf ah oo bushimaha casaanka xiddigta cas cas dheer leh ...
Bajamas xariir haweenka khafiif ah oo saddex-geesood ah ...
Ice xariir ah dharka bajamas ee dharka dhaadheer ee gacmaha dhaadheer ...
Gacmo-Dheer-gacmeed-Dheer-Dheer Oo Adag Oo Naag Ah Oo Naago Ah
Surwaal gacmo dhaadheer oo gacmo dhaadheer gacmo dheer leh ...
2021 maryaha xagaaga cusub ee jiifka ayaa dhigay laba qaybood th ...